Mon, Sep 21, 2020 at 9:14pm
'एक सिटमा एक जना मात्र बसौँ' #आहा खबर# 'बेलायतमा महामारीका कारण अझै जटिल दिन आउनसक्छ' #आहा खबर# ट्रम्पः अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको रिक्त पदमा यसै हप्ता मनोनयन हुन्छ #आहा खबर# काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक असोज १९ गते बस्ने #आहा खबर# सभापति देउवाले दिए जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागलाई पूर्णता #आहा खबर# जबरजस्ती करणीको आरोपमा ३ युवा पक्राउ #आहा खबर# आन्तरिक उडान र निकुञ्ज खुलेसँगै सौराहाका पर्यटन व्यवसायी उत्साहित #आहा खबर# प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा ‘हिमचितुवा’ शेर्पाप्रति श्रद्धाञ्जलि व्यक्त #आहा खबर# मकवानपुरमा जीप दुर्घटना हुँदा दुई बालकको मृत्यु #आहा खबर# धितोपत्र बजारः थामियो नेप्से #आहा खबर# अध्ययनः विश्वका सबैभन्दा धनी १ प्रतिशतले अति गरिबको भन्दा ५० गुणा बढी प्रदूषण फैलाए #आहा खबर# साेमबार काठमाडाैं उपत्यकामा थपिए ६ सय ७४ काेराेना संक्रमित, कुन जिल्लामा कति ? #आहा खबर# काेराेनाबाट पछिल्लाे २४ घण्टामा देशभर थप १६ जनाको मृत्यु, कहाँ कति ? #आहा खबर# आज देशभर १ हजार १ सय ५४ संक्रमित थपिए, १ हजार ५ जना काेराेना मुक्त #आहा खबर# धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठानमा उपचाररत दुई कोरोना संक्रमित महिलाको मृत्यु #आहा खबर#
सोमबार, असोज ५, २०७७ साल
एजेन्सी । बेलायतका वरिष्ठ चिकित्सा सल्लाहकारहरुले देशमा कोरोनाभाइरसका कारण नराम्रो दिन आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । महामारीको पछिल्लो अवस्था हेर्दा र थप उच्च व्यवस्थापन गर्न नसकिएमा नराम्रो अवस्था आउनसक्ने उनीहरुले सोमबार चेतावनी दिएका हुन् । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर आएको र त्यसले तल्लो तहसम्म र पहिलाभन्दा बढी असर पार्न सक्ने उनीहरुको विश्लेषण छ । दोस्रो चरणको महामारीमा हरेक हप्ता दोब्बर सङ्क्रमितहरुको..
एजेन्सी । स्वर्गीय रुथ बाडर जिन्सबर्गको स्थानमा खालि स्थानमा यो हप्ताको अन्त्यसम्ममा नयाँ व्यक्तिको मनोनयन गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार बताएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन पहिले नै सिनेटले उक्त मनोनयनका लागि भोट गर्नुपर्ने उनले बताए । राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी समाचार संस्था फक्स न्यूजसँग भने, “मैले शुक्रबार वा शनिबार मनोनयनको घोषणा गर्नेछु र त्यसपछि काम सुरु हुन्छ तर आशा गरौँ..
नयाँदिल्ली, ५ असोज । भारतको राज्यसभाका आठ विपक्षी सांसदहरू एक साताका लागि निलम्बनमा परेका छन् । उनीहरू राज्यसभामा कृषि सुधार विधेयकबारे छलफल चलिरहँदा ताेडफाेमै उत्रेपछि अनुशासनहीनताको आरोपमा निलम्बनमा परेका हुन् । तोडफोडमा उत्रिनेमध्ये आठ जना सांसद निलम्बनमा परेको राज्यसभाका अध्यक्ष एम वेन्कैया नायडूले जानकारी दिए । साथै विपक्षीहरुले उपसभापति हरिवंशविरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव पनि खारेज गरिएको नायडूले जानकारी दिएका छन् । उनले आइतबारको दिन राज्यसभाको लागि निकै..
आईतवार, असोज ४, २०७७ साल
एजेन्सी । कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या लगातार वृद्धि हुन थालेपछि बेलायती सरकारले कडा नियम लागू गर्ने भएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार ‘सेल्फ आइसोलेसन’को आदेशलाई तोड्ने आफ्ना नागरिकलाई बेलायती सरकारले १० हजार पाउन्ड (झण्डै १५ लाख नेपाली रूपैँया) सम्म जरिवाना गर्ने बताइएको छ । बेलायतमा शनिबार मात्र करिब चार हजार ५०० नयाँ सङ्क्रमित भेटिएका थिए भने २७ जनाको मृत्यु भएको थियो ।..
भियतनाममा शक्तिशाली आँधी: तीन जनाको मृत्यु, एक सयभन्दा बढी घाइते
एजेन्सी । भियतनाममा केही दिनयतादेखि शक्तिशाली आँधी आएको छ । आँधीमा परी तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने एक सयभन्दा बढी घाइते भएका छन् । भियतनामका केही मध्य क्षेत्रीय प्रान्तहरुमा यो आँधी आएको छ । नोउल नामको सो आँधीका कारण भौतिक संरचनाहर पनि भत्किएका छन् । यस आँधीमा परेर ११२ जना नागरिक घाइते भएका छन् । सो कुराको जानकारी भियतनामको राष्ट्रिय..
क्यानडाका पूर्व प्रधानमन्त्री जोन टनरकाे निधन
एजेन्सी । क्यानडाका पूर्व प्रधानमन्त्री जोन टनरकाे निधन भएकाे छ । ७९ दिन मात्र सत्तामा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री टनरकाे ९१ वर्षको उमेरमा निधन भएको हाे । जोन टनर, जो मात्रै ७९ दिन सत्तामा थिए र आफ्नो लिबरल पार्टीलाई सन् १९८४ को चुनावमा ठूलो हारबाट जोगाउन सकेका थिएनन् । पेशाले वकिल रहेका उनले सन् १९६८ देखि १९७५ सम्म वित्त मन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उनले पार्टीका..
भारतको मिजोरम राज्यमा ४.६ रेक्टर स्केलको भूकम्प
काठमाडौं, ४ असोज । छिमेकी राष्ट्र भारतको उत्तर पूर्वको मिजोरम राज्यमा आइतबार (आज) बिहान भूकम्पको झट्का महसुस गरिएको छ । भारतको नेश्नल सेन्टर फर सिस्मोलोजीका अनुसार मिजोरम राज्यमा विहान साढे सात बजे ४.६ रेक्टर स्केलको भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको हो । एनसीएसका अनुसार उक्त भूकम्पको केन्द्रबिन्दू मिजोरमको चंफईमा थियो । के–कति क्षति भयो/भएन भन्ने विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको जानकारी गराइएको छ..
कोभिड–१९ को पहिलो औषधि फार्मेसीमा बिक्री गर्न स्वीकृत
एजेन्सी । कोभिडबाट संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि आर–फर्माको ‘कोरोनाभर’ औषधि सबै फार्मेसीहरुले बिक्री गर्न स्वीकृति पाएका छन् । रुसले उक्त औषधि बिक्री गर्न अनुमति दिएकाे हाे । यो एन्टिभाइरल औषधि यसै हप्तादेखि सबै फार्मेसीमा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएकाे छ । गत मे महिनामा पनि रुसले ‘एभिफेभिर’ नामक औषधि अस्पतालमा प्रयोग गर्ने अनुमति दिएको थियो जुन जापानमा निर्माण भएको हो र भाइरल उपचारका लागि अधिक प्रयोग..
फिलिपिन्सका राष्ट्रपति डुटेर्टेले एक वर्ष थप गरे संकटकाल
शनिबार, असोज ३, २०७७ साल
एजेन्सी । फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले देशमा जारी संकटकाललाई थप एक वर्ष लम्ब्याएका छन् । कोरोनाभाइरसको महामारीलाई कारण देखाउदै उनले अर्को वर्ष सन् २०२१ को सेप्टेम्बरसम्म कायम रहने गरी उनले संकटकाल घोषणा गरेका हुन्। घोषणा नं. १०२१ मार्फत् उनले संकटकाललाई लम्ब्याएको राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन । संकटकाल लम्याउने विषयमा शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको छ । तर अहिले घोषणा गरिएको संकटकाल..
चिनियाँ सैनिकले कब्जा गर्‍याे भारतका १० सीमा गस्ती क्षेत्र
काठमाडाैं, ३ असाेज । भारत–चीन सीमा क्षेत्रको पूर्वी लद्दाखस्थित वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) मा रहेका भारतका १० गस्ती क्षेत्रमा चिनियाँ सैनिकले कब्जा गरेकाे खबर प्रकाशित भएकाे छ । भारतको अंग्रेजी पत्रिका द हिन्दूले प्रकाशित गरेको खबरमा उत्तरमा डेपसाङ्ग मैदानदेखि दक्षिणमा प्याङ्गोङ्ग तालसम्मका १० वटा पेट्रोलिङ्ग प्वाइन्टमा चिनियाँ सैनिकका कारण भारतीय सैनिक जान नसकेको उल्लेख हाे। द हिन्दूले वरिष्ठ सैन्य अधिकारीलाई उद्धृत गरी..
कोरोना : रुसले नयाँ एन्टि भाइरल औषधि ‘कोरोनाविर’लाई दियो अनुमति
काठमाडौं, ३ असोज । रुसले कोभिड–१९ को साधारण लक्षण देखा परेका संक्रमितहरुका लागि एक एन्टि–भाइरल औषधिलाई अनुमति दिएको छ । उक्त औषधिको नाम ‘कोरोनाविर’ नाखिएको छ । यस औषधिलाई आर–फार्म कम्पनीले बनाएको हो । उक्त कम्पनीले शुक्रबार (हिजो) कोरोनाविरलाई आगामी सातासम्ममा रुसको सम्पूर्ण पसलहरुमा उपलब्ध हुने बताएको छ । कोरोनाविरलाई ‘प्रिसक्रिप्सन ड्रग’को रुपमा अनुमति दिइएको बताइएको छ । यस औषधिलाई डाक्टरहरुको सल्लाह..
भारतका केन्द्रीय यातायात मन्त्री नितिन गड्करीलाई कोरोना सङ्क्रमण
बिहिवार, असोज १, २०७७ साल
एजेन्सी । भारतका केन्द्रीय यातायात मन्त्री नितिन गड्करीलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको छ । उनले आफू कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी दिएका छन् । उनले पछिल्लो समयमा आफ्नो सम्पर्कमा आएकाहरुलाई तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण गर्न र सतर्कता अपनाउन पनि आह्वान गरेका छन् । “मैले हिजो कमजोर महसुस गरेँ, अनि मैले चिकित्सकसँग परामर्श गरेँ, अनि कोरोना परीक्षण गर्दा कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएको नतिजा आयो,”..
'अमेरिकामा अक्टोबरदेखि कोरोनाविरुद्धको खोप बाँड्न सकिन्छ'
एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी अक्टोबरसम्ममा कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप अमेरिकामा वितरण गर्न सकिने बताएका छन् । स्थानीय समय अनुसार बुधबार उनले अक्टोबरमा देशभरी नै खोप वितरण गर्न सकिने संभावना रहेको जानकारी दिएका हुन् । उनले सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा १० करोड खोप वितरण गर्ने तयारी भइरहेको बताए । कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप तयार हुदैछ, हामी आगामी अक्टोबर महिनामा त्यसलाई वितरण गर्न सक्ने..
अमेरिकाबाट १५ हजार नेपालीसहित ४ लाख आप्रबासीलाई देश निकाला गरिने
काठमाठौं, १ असाेज। ट्रम्प सरकारले १५ हजार नेपालीसहित ४ लाख आप्रबासीलाई देश निकाला गर्ने तयारी गरेकाे छ। करिब ४ लाख आप्रवासीलाई देश निकाला गर्न सक्ने गरी अदालतले बाटो खुला गरेपछि अमेरिकाले यस्ताे तयारी गरेकाे हाे । अब ट्रम्प सरकारले ‘टेम्पोररी प्रोटेक्सन स्टाटस’ (टीपीएस) अन्तर्गत अमेरिकामा बसिरहेका आप्रवासीहरुलाई देशबाट निकाल्न सक्नेछ ।यसरी देश निकाला हुनेमा नेपालसहित, एल साल्भाडोर, हाइटी, निकारागुआ, सुडान र होन्डुराससहितका १० देशका आप्रवासी बढी..
रहेनन् बिल गेट्सका पिता हेनरी गेट्स
बुधबार, भाद्र ३१, २०७७ साल
एजेन्सी । माइक्रोसफ्टका सहसंस्थापक बिल गेट्सका पिता विलियम हेनरी गेट्स द्धितीयको ९४ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । उनको ९४ वर्षको उमेरमा हुड क्यानलस्थित निवासमा सोमबार निधन भएको बताइएको छ । विल गेट्सको पारिवारिक स्रोतले उनको सोमबार निधन भएको जानकारी मंगलबार गराएको हो । उनी अल्जाइमरको विरामी थिए । विलियम हेनरी गेट्स द्धितीयको सन् १९२५ मा वासिङ्टनको बेरमर्टनमा जन्म भएको थियो..
भारतको बिहारमा चट्याङ लागेर १५ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । भारतको बिहार राज्यका विभिन्न जिल्लामा हालै केही दिनयता भएको अविरल वर्षा र त्यसपछिको चट्याङमा परी १४ जनाको ज्यान गएको छ । यसै हप्ता बिहारका विभिन्न छ जिल्लामा परेको चट्याङ लागेर १५ जनाको मृत्यु भएको हो । समाचारमा जनाइएअनुसार अविरल वर्षासँगै परेको चट्याङले लागेर उनीहरुको निधन भएको हो । चट्याङका कारण गएको तीन दिनमा ती नागरिकको ज्यान गएको र अरु केही..
योशिहिदे सुगा बने जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री
टोकियो, ३१ भदाै । जापानका नयाँ प्रधानमन्त्रीमा योशिहिदे सुगा निर्वाचित भएका छन् । बुधबार संसदमा भएको मतदानमा ३ सय १४ मतसहित सुगा जापानको नयाँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका हुन् । जापानी समाचार एजेन्सी कोयदो न्युजका अनुसार लिब्रल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) को बहुमत रहेको संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिका ४ सय ६५ सदस्यमध्यबाट ३ सय १४ मत प्राप्त गरेको छ । स्वास्थ्य समस्याका कारण प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका..
स्वास्थ्यका कारण जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो अबेले दिए पदबाट राजीनामा
टाेकियाे, ३१ भदाै । जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो अबेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। जापानमा सबैभन्दा लामो शासन गर्ने अबेले स्वास्थ्यको कारण राजीनामा दिएका हुन्। अबेको स्थानमा हालका चिफ क्याबिनेट सेक्रेटरी योशिहिदे सुगा जापानको नयाँ प्रधानमन्त्री हुनेछन्। सोमबार भएको पार्टीको अन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सुगा पार्टी प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए। प्रधानमन्त्री अबेले आफूलाई जस्तै योशिहिदे सुगालाई पनि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। सुगालाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न..
भारतमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८० हजार ७ सय ७६ पुग्याे
नयाँदिल्ली, ३१ भदाै । कोरोना संक्रममणबाट हालसम्म भारतमा ८० हजार ७ सय ७६ जनाको मृत्यु भएकाे छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा १ हजार ५४ कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ८३ हजार ८ सय ९ संक्रमित थपिएका छन् । अघिल्लो २४ घण्टामा ९२ हजार ७१ कोरोना संक्रमित थपिएका तथ्यांकमा उल्लेख छ । भारतमा हालसम्म..
फ्रान्समा फेरि संक्रमित बढ्न थालेपछि सतर्कता बढाइयो, सार्वजनिक गतिविधिमा कडाई
मंगलवार, भाद्र ३०, २०७७ साल
एजेन्सी । कोरोना भाइरस महामारीको संक्रमण फ्रान्समा फेरि बढ्न थालेसँगै फ्रान्स सरकारले देशका प्रमुख दुई शहरमा सार्वजनिक कृयाकलापमा कडाई गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रव्यापी लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन पनि फ्रान्स सरकारले सतर्कता बढाएको हो । सोमबार घोषणा गरिएका नयाँ प्रतिबन्धहरु मार्से र बोर्डो शहरमा लागू हुँदैछन् । यी दुई शहरमा पछिल्ला दिनहरुमा कोरोना संक्रमितको संख्या एकाएक बढेको छ ।..
अफगानिस्तानमा बम हमलामा परी ५ सैनिकको मृत्यु
एजेन्सी । अफगानिस्तानको पश्चिमी बागदिस प्रान्तमा सोमबार भएको एक बम हमलाको घटनामा पाँच जना अफगान सेनाको ज्यान लिइएको छ । पश्चिमी बागदिस प्रान्तको अबकामारी जिल्लामा सोमबार अपरान्ह सडक किनारमा राखिएको बम विस्फोट गराएर ती सैनिकका ज्यान लिइएको हो । प्राप्त समाचारअनुसार उक्त जिल्लाको एक राजमार्गमा लुकाई छिपाई राखिएको बम सेनाको सवारीमा नजिक पुगेपछि विस्फोट भएको थियो । त्यस विस्फोटमा परी सुरक्षा गस्तीमा हिँडेको..
ब्राजिलमा कोरोनाः १ लाख ३१ हजारभन्दा बढीको मृत्यु
सोमबार, भाद्र २९, २०७७ साल
एजेन्सी । ब्राजिलमा सोमबार बिहानसम्म कोरोना भाइरसका सङ्क्रमणबाट १ लाख ३१ हजार ६२५ जनाको ज्यान गएको यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सो मन्त्रालयका अनुसार यहाँ गएको हप्तादिनमा मात्र ४ हजार जनाको ज्यान गएको छ । उक्त मन्त्रालयका अनुसार यहाँ यो संक्रमणबाट गएको २४ घन्टामा ४१५ जनाको ज्यान गएको छ । यो सँगै यहाँ १ लाख ३१ हजार ६२५ जनाको..
भारतका गृहमन्त्री शाह अस्पताल भर्ना
आईतवार, भाद्र २८, २०७७ साल
एजेन्सी । भारतका संघीय गृहमन्त्री अमित शाह नयाँ दिल्लीस्थित एम्स अस्पतालमा अस्पताल भर्ना भएका छन् । पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षणका लागि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको अधिकारीहरुले आइतबार जानकारी दिएका छन् । उनलाई गत अगस्टको २ तारिखमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि कोरोना नेगेटिभ देखिएपछि उनलाई अगस्ट १४ मा डिस्चार्ज गरिएको थियो । त्यसपछि लगातार उच्च स्वास्थ्य निगरानीमा रहेका शाह त्यतिबेलाको सङ्क्रमणको..
तालिवान विद्रोहीसँग पहिलो प्रत्यक्ष ‘ऐतिहासिक’ शान्तिवार्ता शुरु
दोहा, २८ भदाै । तालिवान विद्रोहीसँग पहिलो प्रत्यक्ष शान्तिवार्ता शुरु भएकाे छ । अफगान सरकार तथा तालिवान विद्रोही समूहबीचुको पहिलो प्रत्यक्ष शान्तिवार्ता कतारको राजधानी दोहामा शनिबार सुरु भएको हाे । वार्ताको उद्घाटन सत्रमा उपस्थित हुन दोहा पुगेका अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पियोले दुई पक्षबीचको वार्तालाई ‘ऐतिहासिक’ भनेका छन् । फेब्रुअरीमा अमेरिका र तालिवानबीच सुरक्षा समझदारी भएलगत्तै यो वार्ता हुने ठानिएको थियो । तर बन्दीहरूको आदानप्रदानबारेको विवादास्पद समझदारी..
मुक्त भएका भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई श्वासप्रश्वासको समस्या, अस्पताल भर्ना
नयाँदिल्ली, २८ भदाै । काेराेना संक्रमण मुक्त भएका भारतका गृहमन्त्री अमित शाह अस्पताल भर्ना भएका छन्। काेराेना संक्रमणलाई जितेका शाहलाई फेरि श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि शनिवार राती नयाँदिल्लीस्थित एम्स अस्पतालमा भर्ना गरिएको इण्डिया टुडेले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणमुक्त भए पनि गृहमन्त्री शाहलाई श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएको हो। चिकित्सकहरुले शाहलाई केही समय अस्पतालमै राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। चिकित्सकहरुको निगरानीमै उनको उपचार चल्नेछ। शाहलाई एम्सको कार्डियो..
अमेरिकामा जारी भीषण डढेलोमा ८ जनाकाे मृत्यु, कैयौं बेपत्ता
एजेन्सी । केही दिनदेखि अमेरिकाको उत्तर–पश्चिमी राज्य अरेगोनस्थित जंगलमा डढेलाे फैलिइरहेको छ। उक्त डढेलाेमा परि शनिबारसम्म ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने कैयौं व्यक्ति बेपत्ता भएका छन्। स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार साँझ अरेगोनका गभर्नर केट ब्राउनले कैयौं मानिस हराइरहेको र दशौं हजार आफ्नो घर छाड्न बाध्य भएको जानकारी दिएका छन्। राज्यको आपतकालीन व्यवस्थापन निर्देशक एन्ड्र्यु फेल्प्सलेले डढेलोका कारण ठूलो संख्यामा मृत्यु भएको..
कंगोकाे सुनखानीमा पहिरो जाँदा ५० जना भन्दा बढी कामदारको मृत्यु
एजेन्सी । कंगोमा रहेकाे एउटा सुनखानीमा पहिरो जाँदा ५० जना भन्दा बढी कामदारको मृत्यु भएको छ। धेरै दिनदेखि भइरहेकाे भारी वर्षापछि सुनखानीमा पहिरो गएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्। कंगोको दक्षिण किवु प्रान्तको कमितुगा सहरमा शुक्रबार घटना भएको हो। प्रान्तीय गभर्नर थेओ एनग्वाबिड्जे कासीले शनिबार बिहान एक विज्ञप्तिमार्फत् घटनाको पुष्टि गरेका छन्। ‘पीडितहरूमध्ये केही बालबालिकासहित अधिकांश युवाहरु रहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रान्तीय प्रशासक कासीले उद्धारकर्ताहरूले मृतकको..
चीनबाट उत्तर कोरियाको सिमानामा छिर्नेलाई सिधै गोली हान्‍न आदेश
शनिबार, भाद्र २७, २०७७ साल
एजेन्सी, २७ भदाै । उत्तर कोरियाले कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथामका लागि थप कडाइ गरेको छ । चीनसँगको सीमाक्षेत्रमा उत्तर काेरियाले थप कडाइ गरेको हो । दक्षिण कोरियास्थित अमेरिकी सैन्य कमाण्डरका अनुसार उत्तरले चिनियाँ भूमिबाट छिर्नखोज्ने मानिसहरुलाई नसोधिकन गोली हान्‍नेसम्मको आदेश सुरक्षाकर्मीलाई दिएको छ । यस अनुसार उत्तरका अधिकारीले आफ्नो देशको एक किलोमिटर भूमिसम्म छिर्नेहरुलाई नसोधी गोली हान्न पाउनेछन् । चीनबाट कोरोना संक्रमित सीमाभित्र छिर्नसक्ने भएकाले..
अमेरिकी निर्वाचन अभियानमा ह्याकरहरुको आक्रमण भइरहेको दाबी
शुक्रबार, भाद्र २६, २०७७ साल
काठमाडौं। अमेरिकामा हुन लागेको राष्ट्रिपतीय निर्वाचनको प्रसारप्रसार अभियानलाई ह्याकरहरुले लक्षित गरिरहेको पाइएको छ। प्रभावशाली सूचना प्रविधि कम्पनीका रुपमा रहेको माइक्रोसफ्टले त्यस्ता विवरणहरु आफुहरुले धेरै प्राप्त गरेको जानकारी दिएको छ। निर्वाचन लक्षित गतिधिविधिहरुमा भइरहेका साइबर आक्रमणहरु विषेशगरेर रुस, चीन र इरानबाट भइरहेको पनि कम्पनीले बिहीबार स्पष्ट पारेको छ। त्यस्ता कार्यबाट उनीहरुले कतिपय व्यक्तिगत र कतिपय संस्थागत सूचनाहरु लिने गरेको माइक्रोसफ्टका अधिकारीहरुले जनाएका..
Results 1756: You are at page 1 of 59
1234567 8910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Next Last
काठमाडौंमा अत्यावश्यक वस्तुको खरिद बिक्रीका लागि समयसीमा निर्धारण, कुन समय के सेवा ?